29 May 2017 | सोमबार, १५ जेष्ठ, २०७४ | Edition : Nepal |
भिडियो एमालेको योजनाः सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा, नभए प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार
कुलमान र प्रचण्डपुत्र प्रकाशलाई सरकारकाे समान सम्मानः कतै कुलमानको अपमान त भएन ?
भरतपुरका मतदान अधिकृतको ‘खतरानाक पिसाब’
दोस्रो चरणको चुनाव गराउलान् त देउवाले !
यस्ता छन् विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई कडा चुनौती दिने उत्तर कोरियाका अजब गजब कानुनहरु उत्तर कोरियाले गर्यो अर्को मिसाइल परिक्षण, सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकाको चेतावनी
कांग्रेस माओवादीद्वारा महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन निवेदन राष्ट्रपतिद्वारा दशौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चियापान आयोजना
भरतपुर अपडेटः वडा नम्बर १९मा एमालेको राम्रो, २०मा कांग्रेसको
भरतपुरको विवाद मिल्यो, मतगणना सुरु
हवाई आक्रमणमा परी १३ जनाको मृत्यु
भरतपुरको मतगणना रोकिएसँगै अनेक शंका बढ्यो
भरतपुरमा रेणुको मत बढेको बढ्यै, मतान्तर घटेको घट्यै
भरतपुरको मेयरको फैसला वडा १९ र २० निर्भर, झन रोमाञ्चक मोडमा गणना
साझा पार्टीको निष्कर्ष: काठमाडौंमा जग हाल्न सफल भयौं
विद्यासुन्दरलाई शुभकामना दिँदै राजुराजले भनेः नवनिर्वाचित प्रमुखसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छु
राजनीति राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई ओलीकाे सुझावः निहुँ नखोज्नुस्
पोखरा, जेठ १४ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
संसदमा प्रचण्डको दावीः सरकार कामचलाउ होइन
कञ्चनपुरमा यस्ता छन् माओवादी उम्मेदवार
महोत्तरीमा सेना खटाइयो
नेपाल राष्ट्रपतिको चियापानमा जे देखियो, हेर्नुहोस् ८ रोचक तस्वीरः
काठमाडौँ, जेठ १४ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दशौं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चियापान समारोहको आयोजना गरेकी छिन् ।
राष्ट्रपतिद्वारा दशौँ गणतन्त्र दिवसका अवसरमा चियापान आयोजनावागमतीपछि अब सफाई गर्ने पालो चक्रपथको
महानगर प्रमुखमा विजयी भएपछि यसरी खुशी साटे विद्यासुन्दर शाक्यलेनीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारितमुस्लिम समुदायको एक महिने व्रत रमजान सुरुप्रधानमन्त्रीले गरे द्रुतमार्ग शिलान्यासविद्यासुन्दरलाई शुभकामना दिँदै राजुराजले भनेः नवनिर्वाचित प्रमुखसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छु
खेल ‘मैले बेलोन डि‘ओर जित्न मेस्सी र रोनाल्डोलाई मार्नुपर्ने हुन्छ’ एजेन्सी, १४ । विवादित बयान दिएर होस् वा खेल मैदानमा अनौठो हर्कत गरेर होस् चर्चामा आउन यी खेलाडीले धेरैलाई पछि पारेका छन् । फ्रेन्च क्लब निसका स्टाइकर मारियो बालोटेलीले पछिल्लो पटक केही यस्तै बयान दिएका छन् ।
यी हुन् बार्सिलोनाका खेलाडीहरुका श्रीमती तथा प्रेमिकाहरु
एजेन्सी, १४ जेठ । बार्सिलोना विश्वकै एक प्रतिष्ठित फुटबल क्लब हो । यस क्लबबाट फुटबल खेलेका खेलाडीहरु प्राय सबै नै चर्चामा आइरहेका हुन्छन् ।
मड्रिडमा बार्सिलोनाको कोपा डेल रे ह्याट्रिक
काठमाडौं, जेठ १४ । बार्सिलोनाले लगातार तेस्रो पटक स्पेनिस कोपा डेल रे फुटबलको उपाधी जितेको छ ।
१० खेलाडीमा सिमित चेल्सीलाई हराउँदै आर्सनल एफए कप विजेता
काठमाडौं, जेठ १४ । आर्सनलले कीर्तिमानी १३ औं पटक एफए कपको उपाधी उचालेको छ ।
अर्थ आर्थिक वृद्धिदर २३ वर्षपछिकै उच्च, यस्तो छ वर्षभरीको आर्थिक गतिविधी
काठमाडौँ, जेठ १४ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
किन बालुवामा पानी हालेजस्तो हुन्छ सार्वजनिक संस्थानमा तीन खर्ब लगानी
काठमाडौँ, जेठ १४ । मुलुकका सार्वजनिक संस्थानमा दुई खर्ब ७४ अर्ब लगानी प्रवाह भए पनि अपेक्षित उपलब्धि भने हासिल हुन नसकेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
२८ सयकाे अलैैंचीकाे मुल्य घटेर १४ सय, मुल्य नपाएपछि उत्पादित अलैैंची किसानकाे घरमै थन्कियाे
पर्वत, जेठ १३। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष अलैँचीको मूल्य करिब आधाले घटेपछि पर्वत जिल्लाको भोक्सिङका किसानले उत्पादन गरेको अलैँची बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।
काठमाडौं, जेठ १२ । यती एयरलाइन्सले नेपाल स्थित युनाइटेड नेसन्ससँगको सहकार्यमा विहिवार दिर्घकालिन विकास योजनार्थ सामान्य सार्वजनिक जागरुकता अभियानको थालनी गरेको छ ।
अन्तर्वार्ता यस्तै भए दोस्रो चरणको चुनाव हुँदैन
नेपालको शान्ति प्रक्रिया र द्धन्द्ध ब्यवस्थापनको लागि सफल मध्यस्तकर्ताको रुपमा सक्रिय बनेका बुद्धिजिवी हुन् डा. केबी रोकाया । माओवादी युद्ध र त्यसपछिको लामो अवधिसम्म उनले नेपाली आन्दोलनरत पक्ष र विदेशी नियोगसँग राम्रो समन्वय गरे । मानवअधिकार आयोगको सदस्य हुँदै नेपाल बौद्धिक मञ्चका अध्यक्ष डा. रोकायासँग नेपालीपत्रका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानीः
‘मिलीजुली’ मेरो दोस्रो सन्तान होकाठमाडौं, जेठ ३ । लिम्बू समुदायबाट साहित्य लेखनमा सक्रिय रहने महिला लेखक दुई जना मात्रै छन् । त्यसमध्ये एक हुन् शान्ति लिम्बू । शान्तिको पहिलो उपन्यास ‘मिलीजुली’ गत साता सार्वजनिक भयो । लामो समयदेखि बेलायत बस्दैआएकी शान्तिले उतै बसेर तयार पारेको आफ्नो कृति नेपाल आएरै सार्वजनिक गरिन् । आफ्नो उपन्यासमा उनले पारु नामकी महिला पात्रको जीवन संघर्षलाई कलात्मक ढंगले उतारेकी छिन् । उनैसँग नेपालीपत्रले गरेको कुराकानी :
वृद्धवृद्धालाई १२ हजार रुपैयाँ महानगर भत्ता दिन्छौंनेकपा एमालेले काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीका सचिव विद्यासुन्दर शाक्यलाई उम्मेदवार बनाएको छ । पार्टीमा करीब आधा दर्जन उम्मेदवारका आकांक्षीमध्ये शाक्यले मेयरको टिकटमा बाजी मारे । उनै शाक्यसँग महानगरको विकास र समृद्धीका योजनाबारे नेपालीपत्रले गरेको कुराकानी :
लुकी–लुकी मोबाइलमा पोर्न भिडियो हेर्छन् महिलाकाठमाडौं । मोबाइलबाट पोर्न भिडियो हेर्नेमा महिलाहरु पुरुषभन्दा निकै अघि देखिएका छन् ।
more news बिचार अमेरिकी कार्यकारीको पहिलो विदेश भ्रमणः घुमाउरो रेखामा शान्तिको खोजी- रमेश लम्साल रेणुको चर्चाः प्रचण्डपुत्री भएर मात्रै हो त ?- विमल नेपाल नबिर्सिनुहोस् लाहुरेको योगदानलाई - काङमाङ नरेश राई more news कला र मनोरञ्जन प्रियंका चोपडाको हलिउड फिल्म ‘बेवाच’लाई समिक्षकले उडाए धज्जी मुम्बई । जुन हलिउड फिल्मको लागि बलिउड अभिनेत्री प्रियंका चोपडाले आफ्नो धेरै समय खर्च गरिन् र धेरै कुरा गरिन् त्यसै फिल्मलाई समिक्षकहरुले धज्जी उडाएका छन् ।
पत्याउन गाह्रो पर्छ तर यी हुन् समान उमेर भएका बलिउड कलाकारहरुबलिउड–बलिउडमा लामो समय आफ्नो कला देखाइसकेका अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरुले बलिउडमा आफ्नो एउटा परिचय बनाइसकेका छन् । बलिउडमा केही यस्ता अभिनेता तथा अभिनेत्रीहरु रहेका छन् जसको उमेर एउटै रहेको छ ।
more news खेल ‘मैले बेलोन डि‘ओर जित्न मेस्सी र रोनाल्डोलाई मार्नुपर्ने हुन्छ’ एजेन्सी, १४ । विवादित बयान दिएर होस् वा खेल मैदानमा अनौठो हर्कत गरेर होस् चर्चामा आउन यी खेलाडीले धेरैलाई पछि पारेका छन् । फ्रेन्च क्लब निसका स्टाइकर मारियो बालोटेलीले पछिल्लो पटक केही यस्तै बयान दिएका छन् ।
जीवनशैली यो हो विश्वकै सबैभन्दा महँगो कारएजेन्सी–उक्त बलिस्टिक मिसाइल ४५० किलोमिटर उडेको र पुर्वी समुन्द्रमा खसेको थियो जुन पेनिसुला र जापानको बीचमा रहेको छ ।
विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर युवतीहरु हुने १० देशएजेन्सी–एक वेवसाइटका अनुसार दश देशका युवीतहरु सबैभन्दा धेरै सुन्दर हुने मानिएको छ । लाटभिया र स्वीडेनका युवतीहरु सबैभन्दा धेरै सुन्दर हुने मानिएको छ । भारतले पनि यस सुचीमा स्थान बनाएको छ ।
more news अन्तर्राष्ट्रिय यस्ता छन् विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रहरुलाई कडा चुनौती दिने उत्तर कोरियाका अजब गजब कानुनहरु एजेन्सी, १५ जेठ । तपाईको हेयर स्टाइल कस्तो छ ? तपाईको जन्मदिन कहिले मनाउनु हुन्छ ? तपाई के कपडा लगाउनु हुन्छ ? यस्तो कुराहरुमा समेत नियम भयो भने के गर्नुहुन्छ ? तर, उत्तर कोरियामा भने यस्ता कुराहरुमा नियमहरु रहेका छन् ।
उत्तर कोरियाले गर्यो अर्को मिसाइल परिक्षण, सैन्य कारबाही गर्ने अमेरिकाको चेतावनीएजेन्सी, १५ जेठ । उत्तर कोरियाले जापानिज पानीमा एक पटक पुनः बलिस्टिक मिसाइल परिक्षण गरेको छ । तीन हप्ताको बीचमा उत्तर कोरियाले गरेको यो तेस्रो बलिस्टिक मिसाइल परिक्षण हो ।
more news साहित्य लेखक पौडेलको उपन्यास ‘पैताला’ बजारमा- बजारमा भीष्मको 'पाइला पाइला'- नेपालीपत्र देउतीः पीडित आमाहरुको नाममा- सविता सापकोटा
- more blogs प्रबिधि एनसेलले ल्यायो लाखौ गीतहरुमा निःशुल्क पहुँच सहित गीत सुन्न, गाउन र शेयर गर्न मिल्ने योण्डर म्युजिक एपमेलम्चीमा चाँडै फ्रि वाइफाइः मेयर अर्याल यसरी उडाइँदैछ पहिलाेपटक सुर्तीबाट विमान
९९ देशमा एकैचोटी साइबर आक्रमण, ७५ हजार भन्दा बढि कम्प्युटरले काम गरेनन्विश्वभरका ९९ देशका हजारौं कम्प्युटरमा एकैचोटी साइबर हमला भएको छ जसकारण शुक्रबारसम्म ७५ हजार भन्दा बढी कम्प्युटर प्रभावित भएका छन् ।
more news धेरै पढिएका खबरकहाँबाट आयो रञ्जुलाई त्यत्रो पैसा ?यी नेपाली जसको जिम्मामा छन बेलायती राजपरिवारभरतपुरको वडा नम्बर १६ः जसले जितहारको निर्धारण गर्दैछप्रधानमन्त्रीको राजीनामाः कांग्रेसप्रति इमानदार, देशमाथिको बेइमानीको थिए म्यानचेस्टरका आत्मघाती आक्रमणकारी सलमान ?जान्नुहोस् ‘आर’ बाट नाम सुरु हुने व्यक्ति कस्ता हुन्छन्रकम अभावले महावीर पुनको म्यागसेसे पुरस्कार लिलामीमाभारतको डिजाइनमा प्रचण्डको राजीनामा आएको खुलासा
विचित्र विश्व विचित्र विचित्रका विवाहः कसैले कोब्रा सर्पसँग त कसैले आइफल टावरसँग गरे विवाहसंसारमा धेरै नै अजिव किसिमका मानिसहरु देख्न पाइन्छ । यस्ता अजिव किसिमका मानिसहरुले कहिलेकाँहि यस्ता अजिव हर्कतहरु गर्छन् कि त्यस्ता हर्कतहरु थाहा पाएर हामी अाश्चर्यचकित हुन्छाै ।
यस्ता आचरण भएका व्यक्तिले धेरै सेक्स गर्छन् विवाह गर्न आतुर छन् यी युुवतीहरु, तर यस्तो छ सर्तजान्नुहोस् ‘आर’ बाट नाम सुरु हुने व्यक्ति कस्ता हुन्छन्
यस्ता आचरण भएका व्यक्तिले धेरै सेक्स गर्छन् एजेन्सी–कस्ता आचरण भएका व्यक्तिहरुले बढी सेक्स गर्लान् त ? यो धेरै चासोको विषय हुनसक्छ । समाजमा आचरण खराब भएका व्यक्तिहरु धेरै सेक्स गर्ने धेरैको सोचाइ हुनसक्छ ।
विवाह गर्न आतुर छन् यी युुवतीहरु, तर यस्तो छ सर्तजान्नुहोस् ‘आर’ बाट नाम सुरु हुने व्यक्ति कस्ता हुन्छन्